Muzhinji TO Mapakeji, neimwe nzira inozivikanwa seTransistor Outline mapakeji, ari maviri chikamu kuvaka; musoro we TO uye chivharo TO. Chikamu chemusoro chinoona kuti zvimisikidzo zvakaiswa chisimbiso zvinogashira simba nepo chivharo ichi chichifambisira kufambiswa kwemasaini. KUTI mapakeji anoumba musana wekuisa akasiyana eanowonekera uye emagetsi zvigadzirwa kubva kune emagetsi maseketi ese kusvika kune semiconductors. Kutungamira kunodhonzwa kuburikidza nedzimba kunounza simba kune yakavharwa componen ...
Yakavakwa kuti ikwanise kumira zvakanyanyisa nharaunda, Jitai anotenderera mapakeji, neimwe nzira anozivikanwa sehemmetic zvinongedzo, ane angangoita risingaperi nhamba yekushandisa. Kubva mudenga kuenda kugungwa, isu tinopa zvakajairika uye zvakagadziriswa mhinduro kune yakakura kwazvo mhando yekubatanidza matambudziko. Isu tinogadzira girazi uye zvedongo zvakavharirwa denderedzwa mapakeji anovimbisa kuti akaomarara emagetsi akavharirwa mupakeji anoramba akadzivirirwa kubva kune zvinokuvadza maficha epasi uye nekunze. Jitai condu ...
High Chakachena Graphite MAUMBIRWO
Chinyakare chinoumbwa neforoma zvinowanzo gadzirwa nesimbi. Nekudaro, kubva pakuona kwekuumbwa uye kuumbwa kwavo mhando idzi dzeforoma dzinoomerwa nekutora zvimiro zvakaoma uye kushanda nezvinhu zvinoumbwa. Uyu ndiwo mhedzisiro yekusawirirana kwekupisa kwekuwedzera kwekuwedzera pakati peforoma pachayo uye nezvinhu zvakaiswa mukati. Naizvozvo, graphite yakabuda seyekutanga sarudzo yekugadzira chakuvhuvhu nekuda kwechimiro chayo chaunoda panyama nemakemikari. Jitai anotengesa enor ...
Jitai inogadzira inoenderana seams yekuwisira nickel yakafukidzwa mabheji. Isu tinoshandisa 4J42 alloy uye isina simbi simbi yezvigadzirwa izvi zvinogona kuenzaniswa nechero saizi yechigadziko, zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.